Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanoherana ny kolikoly: Hanao hetsika etsy Analakely ny Wake Up Madagascar
Fanoherana ny kolikoly: Hanao hetsika etsy Analakely ny Wake Up Madagascar
Misy amin’ireo fiarahamonim-pirenena no tsy mipetra-potsiny tahaka ny ataon’ny fikambanana sasany fa mitady ny fomba rehetra hanoherana ny zava-drehetra tsy mety eto amin’ny firenena, anisan’izany ny Wake Up Madagascar. Ity fikambanana ity izay manameloka tanteraka ny kolikoly nibaribary nataon’ireo mpitondra sy ny solombavambahoaka tamin’ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fifidianana, teny amin’ny Antenimierampirenena. Ho an’ny Wake Up Madagascar dia tsy azo ekena mihitsy ny fizarana volabe tsy toko tsy forohina amin’ireo solombavambahoaka kanefa ny 90 isan-jaton’ny Malagasy miaina ao anatin’ny fahantrana lalina. Ho fanoherana izay kolikoly mamohehatra nataon’ny mpitondra sy ny depiote izay dia hanatanteraka hetsika etsy anoloanan’ny lapan’ny tanàna Analakely ny fikambanana, amin’ity anio ity, izay hiantsoan’izy ireo ny olom-pirenena rehetra tsy mankasitraka ny kolikoly. Somary hiavaka kely ny hetsika hatao amin’io fotoana io satria fananganana tanana tahaka ny ataon’ireo depiote rehefa mandany lalàna no hatao, manomboka amin’ny 12 ora sy 15 mn. Ny hevitra tiana hampitaina amin’izany dia ny hoe mampanan-karena ireo solombavambahoaka ny manangan-tanana ka mba hiaraka hanangan-tanana ihany koa ny vahoaka mahatsiaro ho sahirana sy mijaly noho ny fahantrana. Marihana fa tao anatin’izao fitondran-dRajaonarimampianina izao dia efa imbetsaka no nanao fihetsiketsehana hanoherana ny tsy rariny sy ny zavatra tsy mety eto amin’ny firenena ny Wake Up Madagascar, isan’izany ohatra ny fanoherana ny delestazy sy ny fandaniam-bola amin’ny fanaovana lanonana sy fisakafoanana eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha rehefa tonga ny taona vaovao.
Atsimondrano: Miparitaka ny trakitra manohitra ny depiote Jaona Elite
Fomba fiady pôlitika hafa kely no miseho eny Atsimondrano eny, amin’izao fotoana. Tao anatin’ny andro vitsy teo izay, tao aorian’ny fankatoavan’ireo solombavambahoaka ireo lalàna fehizoro momba ny fifidianana, dia miparitaka amin’ny fokontany maromaro eny amin’iny faritra Atsimondrano iny ny trakitra (tract) izay manohitra ny depiote voafidy teny an-toerana, tsy iza izany fa ingahy Jaona Elite. Tsy mitovy amin’ireo trakitra pôlitika fahita teto Andrenivohitra hatramin’izay ireto trakitra misy manaparitaka ireto satria saika mitovy tsy misy valaka amin’ireny peta-drindrina ataon’ny mpanakanto sy ny fiangonana sekta ireny mihitsy. Hita ao anatin’io trakitra io ny sarin’ny depiote Jaona Elite eo akaikina volabe, ary misy ny filazàna manao hoe
“ Ampy zay ny kolikoly, leo izahay vahoaka voafitakareo, tsy mankasitraka ny kolikoly avo lenta nataon’i Jaona Elite izay nandray vola 50 tapitrisa ariary teny amin’ny hôtely Paon d’Or”. Tsy fantatra mazava ny toerana nipoiran’io trakitra io fa efa feno azy eny Ampitatafika, Fenoarivo sy Anosizato Andrefana, amin’izao fotoana izao.